Ny mpianatra tao Antsahabe 1972-1977
Date: 25 février 2017 - 01:46
Arak'io sujet io ,mba mila témoignage n'ireo mpianatra EPP'Antsahabe taloha .
Razafintsalama Jules ,raha tsy diso aho ny Tale,.Ny toerana misy ny sekoly dia eo akaikin'ny tunnel Ambanidia ,Mascotte ,...
I Tompokovavy Raveloarisoa Helmine ,moa efa nodimandry 6 taona lasa izay anisan'ny mpampianatra classe de 7èB tamin'izany .Tsy tadidiko intsony ny anaran'ireo mpampiantra sasany .
I Andriantsoa Tahiry tao koa efa chef cuistot any Suisse .
Re: Ny mpianatra tao Antsahabe 1972-1977
Date: 12 avril 2017 - 16:15
Za mpianatra tao @ 7èC e! Tsy naheno resaka momba an'i Mme Pascaline. Ny mpianatra niaraka tamiko no mbola misy mifankahita sy mifankahalala toera-piasàna amiko
Date: 31 mai 2017 - 22:56
Tadidiko koa i Mme Pascaline mpampiantra tao @ 7ème C ,hi ,hi ,....
Eo @ cinquatine d'année eo daholo isika izao entre 51 et 53 ans . Mbola tsy nenibe izany e !
Ny mpampianatra depuis an'i 12 ème tsy tadidiko anarana daholo intsony .
T@ 1976 aho classe de 7ème B ,dia afaka CEPE fa tsy afaka 6ème teny AVARADROVA ,dia ni -redouble dia ny taona manaraka nanala -ème dia afaka tao @ Square Poincaré ,lasa tanimbarin'Andriana ,...Beantanana Benarimina no Tale tamin'izany izay nandimby an'i Felixon avy eo tsy ni redouble intsony .Afaka bac 1984 tany Tamatave ,dia nanao 1an de service national dia lasa an-dafy ,mbola aty hatramin'izao .
Date: 13 juin 2017 - 11:07
Za anisany mpianatra tao T1 hatramin'ny T5 ireto no mpampianatra tadidiko Mme Pauline T3 dia Mme Marthe T4 ary Mme Fredine , nipetraka teny Ampohipo, T5 ny T1 sy T2 tsy tadidiko
Date: 30 juin 2017 - 11:52
Nianatra tao amin'ny epp Antsahabe indrindra aho tamin'io fotoana lazainao io. Tamin'ny 1977 aho no niala tao fa afaka cepe. I Madame Helmine no nampianatra anay tamin'izany (izaho isan'ireo mpanao cours tao amin'i Madame Helmine tao ampasanisadoda).
Tamin'ny vao nanomboka nianatra tao aho dia i Madame Josephat no mpampianatra. Tsara fanahy iny ramatoa iny, sady mpiara-miangona taminay tao Ankadivato. Tamin'ny 1975, tamin'i Ratsimandrava maty, dia ilay vadin'i directeur no mpampianatra anay. Izaho koa efa nisy fotoana nampianarin'i madame Tabita. Lavavolo be izay io madame io, saingy nasiaka dia nasiaka. Bevohoka izy tamin'izay fotoana izay, ka tsy nahatontosa ny année scolaire fa nosoloin'ilay madame tsara fanahy manao tanavoho izy. Ny zanak'io madame faharoa io (zazalahy) dia niaranianatra taminay koa fa tsy tadidiko ny anarany.
Faly ery taloha rehefa mijery cinéma ao amin'ilay bâtiment eo ampita io. Dia rehefa récréation, dia mifampisintona rantsakazo.
Tadidiko tsara ihany koa ilay milahatra misotro rano eny amin'ny pompe fa izarana nivaquine.
Fa ny souvenir inoubliable dia ny fizarana prix rehefa faran'ny taona. Izaho nahazo prix foana. Tadidiko tsara nahazo boky Le chat botté aho indray taona izay, faly ery, ary koa tantaran'i Robinson Crusoé amin'ny teny gasy.
Anisan'ny programme tena nahafinaritra ahy koa dia rehefa manao tantara amin'ny teny vazaha ilay mpampianatra (tsy haiko classe fahafiry). Nisy lamba feutre maintsomaintso izay niantona tao ambadiky ny tableau. Dia nisy personnages (karazana dessins animés ireny) nisy scratch ao andamosin'ireo sary ireo, ka izay no nahatonga azy afaka niraikitra tamin'ilay lamba feutre. Dia manao tantara amin'ireo personnages ireo ilay mpampianatra. Marie no anaran'ilay personnage vavy.
Ny ankizy mpiaramianatra indray, dia nisy ankizilahy izay hoe Ramanantsoa no anarany, niray dabilio tamiko izy io. Dia nisy koa an'i Rufin ohatran'ny karana iny izy, i Gelin metisy vazaha, i Herilalao nipetraka tao amin'ny dadatoany tao Ankazotokana, i Donna mipetraka eny Ambanidia, i Fara mipetraka eny Avaratr'Antanimora, i Liva toa fianakavian'i madame Helmine raha tsy diso aho mince kely lavavolo be izay izy io, i Vonifanja manao volon'i Mireille Mathieu izay, i Tsito mpanao sakafo, sy ny sisa sy ny sisa.
Mbola betsaka ny souvenir mitamberina ato an-tsaina fa tsy ary ho voatanisa ê.
Date: 03 août 2017 - 22:54
Faly mahalala ano fa dia mahafinaritra tokoa ny mahatsiaro ny fahiny .Misaotra ny tompo fa tsy mbola voan'ny Alzheimer .
Niray kilasy isika anie izany t@ 1977 .Izaho mpianatr'i tompokovavy Helmine izay maty vao haingana ihany t@ 2011 tany ho any .
Efa t@ 1976 aho no classe de 7ème B ,afaka CEPE teny Avaradrova fa tsy afaka 6ème ,dia tsy navelan'i mamanay nadeha école privée fa ny rédouble ,dia année 1977 nanala 6ème fotsiny dia afaka tao @ CEG Square Poincaré (Antanimbarinandriana )izao .Mbola tadidiko ny numéro nahfaka ahy :3145
I Rivo be no tena nahay be ,1er de la classe foana ,botabota iny izy .Izaho koa efa tafiditra 3 ème t@ classement rehefa nizara bulletin ,nahazo loka koa rehefa faran'ny taona .Somary filou ,filou t@ zany koa .Ny remarque naton'i Mme Heelmine ahy dia izao ;manan-tsaina fa kamo . Soa ihany fa tafita ,.Ny classe de seconde aho nandeha tany Toamasina dia tany koa no afaka bac ,avy eo nanohy fianarana an-dafy après service national en 1985 .Mipetraka an-dafy depuis hatramin'izao ,fa depuis 2010 mandeha manao vacances any Mscar foana ,sy manmboatra trano .Fa malahelo be ,hitako hoe lasa potika be i Antsahabe sy Antananarivo .
Ianao tsy efa 51 ans à 53 ans eo izao ??
Raha misy contact ianao ,afaka mihaona pour dire bonjour ,misotro zavatra kely ery @ planète Ambohijatovo,je t'invite au passage satria betsaka zavatra atao foana . . Ny but ko tsy hoe hanadala ,fa mba rencontre avec respect mitantara ny fahiny .
Date: 03 août 2017 - 22:57
Ny anarako : Lalaina